सेनासँग सहमतिपछि यसरी बन्दैछ बृहत् टुँडिखेल पार्क :: Setopati
सेनासँग सहमतिपछि यसरी बन्दैछ बृहत् टुँडिखेल पार्क
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन १५
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको 'बृहत् टुँडिखेल' मास्टरप्लानको संशोधित नक्सा।
जमलको आठ रोपनी जग्गा ‘विवाद’ ले रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्मको क्षेत्र समेट्ने ‘बृहत् टुँडिखेल’ मास्टरप्लानलाई चर्चामा ल्याइदिएको छ।
नाचघर अगाडिको यो जग्गा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको बृहत् टुँडिखेल मास्टरप्लानको अभिन्न अंग हो। प्राधिकरणले टुँडिखेललाई अतिक्रमणमुक्त गरी रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्म फैलिएको खुला सार्वजनिक पार्कमा परिणत गर्ने योजना अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण सकिन लागेको छ।
यसै क्रममा पोखरीसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजका केही पूर्वाधार जमलमा पहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको जग्गामा सार्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ, जसका बारेमा हामीले मंगलबार समाचार प्रकाशित गर्‍यौं।
(हेर्नुहोस्ः जमलको आठ रोपनी जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स होइन, त्रिचन्द्र कलेजको भवन बन्दै)
अब प्रश्न उठ्छ, बृहत् टुँडिखेलअन्तर्गत के–के पर्छन्? यो कागजी परिकल्पना मात्र हो, कि कार्यान्वयन सुरू भइसक्यो? कार्यान्वयन हुँदैछ भने कसरी हुँदैछ?
आजको स्टोरीमा म यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछु।
२०७६ मंसिर २५ गते मैले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग लामो अन्तर्वार्ता गरी उक्त मास्टरप्लानको प्रारम्भिक विवरण लेखेको थिएँ। त्यसयता सात महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ। यसबीच प्राधिकरणले केही हिस्सामा काम थालिसकेको छ भने केहीमा सुरू गर्दैछ। बृहत् टुँडिखेलसँग जोडिएका सरोकारवालाहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी मास्टरप्लानका विभिन्न ‘कम्पोनेन्ट’ संशोधनसमेत गरेको छ। यसमा प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग गरेका छलफल प्रमुख छन्।
टुँडिखेलको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा सेनाको नियन्त्रणमा छ। हेडक्वार्टर, परेड खेल्ने ठाउँ, खेल मैदान, पार्टी प्यालेस, पुस्तकालय लगायतले ओगटेको क्षेत्र पनि बृहत् टुँडिखेलकै हिस्सा हो। त्यसैले, यो मास्टरप्लान कार्यान्वयन गर्न सेनासँगको सहकार्य जरूरी छ।
‘पछिल्लो साढे सात महिनामा हामीले कयौंचोटि सेनासँग बसेर छलफल गर्‍यौं,’ प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले केही साताअघि सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा मास्टरप्लानको अपडेटबारे कुरा गर्दै मसँग भनेका थिए, ‘उहाँहरू यो योजनामा सहमत हुनुहुन्छ। यसनिम्ति सेनाले उपभोग गर्दै आएको कतिपय क्षेत्र सार्वजनिक प्रयोगलाई खुला गर्न राजी हुनुहुन्छ।’
यसलाई थप परिस्कृत बनाउन अहिले पनि प्राधिकरण र सेनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको ज्ञवालीले बताए।
उनले संशोधनसहित तयार पारिएको मास्टरप्लानको अपडेटबारे ‘पावरप्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन’ सहित लामो व्याख्या गरे। सबभन्दा पहिला सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सैनिक मञ्च, टुँडिखेल र त्योभन्दा दक्षिणको सानो टुँडिखेल क्षेत्र कसरी पुनर्निर्माण हुँदैछ, त्यो हेरौं।
यी सबै कुरा गर्दा सहिदगेटको बाटो चाहिँ के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। मैले यही प्रश्न ज्ञवालीसँग सोधेँ।
भुइँचालोमा भत्किएको रानीपोखरी बनाउने काम लगभग सकिएको छ। बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि डेढ–दुई महिनामा पूरा हुनेछ। यो मन्दिर राणाकालीन गुम्बज शैलीको थियो। अहिले राजा प्रताप मल्ल पालाको शिखर (ग्रन्थकूट) शैलीमा बन्दैछ, जुन हामीले चित्रमा मात्र देखेका थियौं।
संरचना तयारीपछि ६० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको यो पोखरीमा पानी भर्ने काम सुरू भएको छ। केही दिनयताको लगातार वर्षाले पोखरीको चारैतिर पानी संकलन हुन थालेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यहाँ ५ फिट पानी भर्न ३ करोड लिटरभन्दा बढी चाहिन्छ।
प्राधिकरणले तिहारको भाइटीकासम्म रानीपोखरीमा प्रवेश खुला गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सम्पदाविद् तथा भूमिगत जलस्रोत विज्ञहरूले अलि बढी समय लागे पनि परम्परागत विधिबाटै पानी भर्न सुझाव दिएका छन्, जसका बारेमा हामीले सोमबार समाचार लेखेका थियौं।
(हेर्नुहोस्ः कसरी भरिएला रानीपोखरीमा लबालब पानी?)
केही दिनदेखिको वर्षाले रानीपोखरीमा भरिएको पानी। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
रानीपोखरी बनाउने काम लगभग सकिएको छ। बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पनि डेढ–दुई महिनामा पूरा हुनेछ। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
शान्ति वाटिकाकै बीचमा अहिले जहाँ गणेशमान सिंहको शालिक छ, त्यहाँ पहिले मल्लकालीन ‘फल्चा’ (पाटी) थियो। उक्त फल्चा मासिएको धेरै भयो। केही पुराना तस्बिरमा मात्र त्यसको झलक पाइन्छ। प्राधिकरणले त्यसै आधारमा फल्चा ब्युँताउने योजना लिएको छ। गणेशमानको शालिक रानीपोखरीकै किनारमा पर्ने गरी नजिकै स्थानान्तरण गरिनेछ। शालिक वरिपरि जमघट गर्ने सानाे ठाउँ बनाइनेछ, जहाँ आवश्यक पर्दा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न सकियोस्। भेटघाट स्थल पनि होस्। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, काठमाडौंका कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान लगायतसँग यसबारे छलफल भएको ज्ञवाली बताउँछन्।
अन्डरपासको योजना अघिल्लो मास्टरप्लानमा पनि थियो। अहिलेको परिस्कृत योजनामा त्यसको डिजाइन फरक रहेछ। पहिले खुलामञ्चमुनि अन्डरग्राउन्ड बाटो बनाउने भनिएको थियो। यो खर्चिलो भएर संशोधन गरिएको उनले बताए।
अब बन्ने बाटो अन्डरग्राउन्ड त होइन, तर जमिनको सतहभन्दा अलिकति होचो भएर जानेछ। यसले वीर अस्पतालबाट टुँडिखेल पल्लो छेउको विद्युत प्राधिकरणलाई जोड्नेछ। यहाँ एकतर्फी सवारी आवागमन मात्र हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणबाट वीर अस्पताल आउने गाडीहरूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। अर्कोतर्फको बाटो खुलामञ्च र सैनिकमञ्च बीचमा बन्नेछ।
खुलामञ्चको भाग सकिएपछि टुँडिखेलको सैनिक मञ्च आउँछ। अहिले यहाँ जुन ठाउँमा मान्छे हिँड्ने बाटो छ, त्यसलाई फराकिलो पारेर एकतर्फी सवारी आवामगन गराइनेछ। यो अन्डरपास रत्नपार्क–खुलामञ्च खण्डमा जस्तै जमिनको सतहभन्दा होचो भएर जानेछ। यहाँ पनि अन्डरपासमाथि एक ठाउँ पैदलमार्ग हुनेछ, जसले खुलामञ्चलाई सैनिक मञ्चसँग जोड्छ।
‘कसरी?’ मैले सोधेँ।
‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण दुई महिनामै सकिँदैछ। कानुन पुस्तकालय भएको घर रेट्रोफिट गरी संग्रहालय बनाउने काम पनि सुरू भइसक्यो। शान्ति वाटिका विस्तारसहित रानीपोखरी वरिपरिको क्षेत्रलाई खुला पार्कमा परिणत गर्ने योजना यही वर्षबाट कार्यान्वयन गर्दैछौं। त्रिचन्द्र कलेजको पूर्वाधार सार्न घन्टाघरपछाडि र जमलमा नयाँ भवन बनाउने काम पनि यो वर्ष सुरू हुन सक्छ,’ उनले विस्तार लगाए।
ज्ञवालीको मुखबाट मास्टरप्लानको फेहरिस्त सुन्दा–सुन्दै मेरो दिमागमा बृहत् टुँडिखेलको परिकल्पना घुम्न थाल्यो।
म रानीपोखरी उत्तरको हरियाली पार्कमा छु। साना केटाकेटी खेल्दै छन्। प्रेमी–प्रेमिका हात समातेर हिँड्दै छन्। वयस्क र वृद्धवृद्धाहरू टहल्न निस्केका छन्। कतै किलकारी सुनिन्छ, कतै हाँसो। कोही भुइँमा डल्लो पारेर बात् मार्दैछन्। कोही कुनामा किताब फैलाएर बसेका।
म मग्न हुँदै रानीपोखरी छिर्छु। लबालब पानी भरिएको पोखरी फन्को मार्छु। मल्लकालीन ग्रन्थकूट शैलीको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर एउटा सेल्फी खिचिक्क पार्छु। प्रताप मल्ल हात्ती चढेको ठूलो मूर्तिको फोटो खिच्दै शान्ति वाटिका छिर्छु। रत्नपार्कमा फुलेका थरीथरीका फूल र पुतलीहरूसँग जिस्कन्छु।
त्यहाँबाट खुलामञ्चतिर जान पैदलपुल छ। म पुल नजिकै जान्छु। डिलमा उभिएर तल हेर्छु। दायाँ वीर अस्पताल र बायाँ विद्युत प्राधिकरणतर्फबाट थोरै भिरालो हुँदै बगेको अन्डरपास आपसमा जोडिएको छ। बाटोमा विद्युत प्राधिकरणतिरबाट आइरहेका एकतर्फी गाडीको लश्कर देखिन्छ, तर त्यसले मेरो पाइला रोकेको छैन। म गाडीको हर्नलाई बाल मतलब गर्दै त्यसैको माथि माथि पैदलपुल नाघेर खुलामञ्च प्रवेश गर्छु।
खुलामञ्चमा मेरो गोडामुनि कमलको फूल आकारमा बनेको मण्डप छ। माथि नेपाली झन्डा फर्फराउँदैछ। म केही बेर सुस्ताउँछु। फोटो खिच्न वरिपरि हरियालीको कमी छैन। खुलामञ्चको अडिटोरियम पनि रंगरोगन गरेर चिटिक्क छ।
म अडिटोरियम घुमेर अर्को अन्डरपास नाघ्दै सैनिक मञ्चमा प्रवेश गर्छु। सेनाको कुनै रोकतोक छैन। टुँडिखेल वरिपरि भुइँमा इँटा बिछ्याइएको पैदलमार्ग छ। छेउछेउमा स–साना बुट्यान छन्। शितल हावा चल्दैछ। चराको चिरबिरले कान चंगा हुन्छ।
केही बेर महांकाल मन्दिरमा भुल्छु। अनि पैदलमार्गमा फटाफट टुँडिखेलतिर लम्कन्छु। टुँडिखेल कहिल्यै खाली हुन्न। कहिले नेपाल सम्बतको उत्सव चल्छ, कहिले उँधौली र उँभौली मनाइन्छ। कहिले धीमेको धमधम सुनिन्छ, कहिले साकेला नाचिन्छ। फरक–फरक जातजातिका फरक–फरक उत्सवले बाह्रै महिना गुल्जार हुने यो चउर हाम्रो सांस्कृतिक विविधताको विम्ब हो।
म सहरको नयाँ ‘स्पोर्टस् हब’ छिचोलेर रंगशालातिर बढ्छु। अनि बृहत् टुँडिखेलबाट बाहिरिन्छु।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७, ०३:३२:००